China Auto Liquid Dispensers Sensor Touchless Auto Foam Soap Dispenser ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Zhaolong
Auto Liquid Dispensers အာရုံခံ Touchless Auto Foam Soap Dispenser
ချစ်စရာကောင်းသောဘဲဒီဇိုင်းသည်ကလေးများအားလက်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်အားထက်သန်စေသည်။
လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုအနီအောက်ရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာကျယ်ပြန့်သော induction range
အနီးရှိ Infrared အာရုံခံကိရိယာ
3-AA Alkaline Battery များ (မပါ ၀ င်ပါ) လိုအပ်သည်။
FOAMING အရည်ဆပ်ပြာသာသာသုံးပါ။ သင်သည်ပုံမှန်အရည်ဆပ်ပြာကို သုံး၍ အချိုး (3: 1 (Water: Soap)) တွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားသောအရည်မြှုပ်သောဆပ်ပြာများကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ (ဆပ်ပြာမပါဝင်ပါ
အာရုံလွှဲပြောင်းလက်ကိုထိပါ။ အစိမ်းရောင် LED မီးဆိုသည်မှာဆပ်ပြာကိုထုတ်ပေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
အနီရောင် LED အလင်းသည်ဘက်ထရီအားနည်းသည်ဟုဆိုလိုသည်။
- ဘက်ထရီများအားသွင်းပြီးသည်နှင့်လက်ကိုနှာခေါင်းမှ (အာရုံခံကိရိယာ) မှဝေးရာသို့မျက်နှာမူသောလက်ဖြင့်စုပ်စက်ပေါ်ရှိလိုချင်သောနေရာကိုရွှေ့ရန်နောက်ဖက်မှဆေးသယ်ဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ မဟုတ်ပါကဘေးဘက်သို့မဟုတ်ရှေ့ဘက်မှကိုင်ထားပါကအနီးအဝိုင်းရှိအနီအောက်ရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးဆပ်ပြာကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
- ရေမြှုပ်သောဆပ်ပြာဖြင့်ဖြည့်ရန် Duck's beak အောက်၌လက်ကိုထားပါ။ ဘက်ထရီများပြည့်နေချိန်တွင်အညွှန်းကိန်းသည်မီးစိမ်းလာပါလိမ့်မည်။
- သင်ဆပ်ပြာကိုပိုပေးလိုပါကလက်ဖြင့်အာရုံခံကိရိယာသို့ပြန်သွားပါ။ အာရုံခံအပြာပြောင်းသွားလိမ့်မည်
-LED Indicator light သည်ဘက်ထရီနိမ့်သည့်အခါအနီရောင်ပြောင်းသွားလိမ့်မည်။
အသားတင်အလေးချိန်: 0.59 .lbs ။ ဘက်ထရီမရှိဘဲ
အရွယ်အစား: 3.74 "L ကို * 3,15" W * 7.1H "
၁. ထိထိလွယ်လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုအနီအောက်ရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာ။ အမြှေးပါးဆပ်ပြာကိုအလိုအလျောက်ဖြန့်ဝေပေးခြင်းအားဖြင့်ပိုးမွှားများကူးလူးကူးစက်မှုကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
2.IPX4 ရေစိုခံနှင့် ABS အပြင်ဘက်ရှိအပြင်ဖက်မှဆပ်ပြာပေးစက်သည်မတော်တဆရေကျသောအခါကျဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ချိန်တွင်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ရန်သေချာစေသည်။
၃။ လျင်မြန်သောတုန့်ပြန်မှုအနီအောက်ရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာသည် activation ပြုလုပ်ပြီးနောက် ၂.၅ စက္ကန့်အတွင်းအမြှုပ်ဆပ်ပြာကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။ အလျင်အမြန်တုန့်ပြန်သောအချိန်ဆိုသည်မှာလက်ဆေးခြင်းသည်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုနှင့်အင်အားစိုက်ထုတ်မှုနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်သည်။
4. Multi-use Soap Dispenser သည်ပန်းကန်ဆေးခြင်းဆပ်ပြာ၊ လက်ဆပ်ပြာထုတ်စက်သို့မဟုတ်ရေချိုးနှင့်ရေချိုးခန်းဆပ်ပြာပေးစက်များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
မော်ဒယ် fi က c-318
ပစ္စည်းအမှတ် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ဖော်ပြချက် FOB NINGBO USD / pcs အထုပ်
QQ318 Soap Dispenser သည်အလိုအလျောက်ရွေ့လျားမှုကိုသက်ရောက်သည် ဆေးထိုး finish 5,05 ဆေးထိုး finish ကို 4,88 ဆေးထိုး finish ကို 4.65 အဖြူရောင်စာတိုက်ပုံးတစ်ခုစီ; ထို့နောက် 24PCS / CTN, ပုံးအရွယ်အစား - 412 * 275 * 245MM; 22,200PCS / 925CTNs / 20 '; 47,040PCS / 1960CTNS / 40 ';
LCD အညွှန်းကိန်း：၎င်းကိုပါဝါသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်သောအခါ LCD အလင်းသည်အစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်။ Battery နည်းတဲ့အချိန်မှာ LCD display ကနီတယ်။
ဆပ်ပြာ၏ပမာဏ：မက်စ် 220ML, မပါဝင်ပါ
ဘက်ထရီစွမ်းရည်：3 AA ဘက်ထရီ (မပါ ၀ င်ပါ) ၉ နာရီဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်သည်။
မော်ဒယ်အရွယ်အစား（L ကို: H ကို: W): 95 * 180 * 80mm
အလေးချိန်: ၂၆၆.၄ ဂ (ဘက်ထရီမရှိ)
နောက်တစ်ခု: ကလေးများအိမ်တွင်းအသိဉာဏ်ရှိသော induction foam အဝတ်လျှော်ဆေးပေးစက်
ကလေးများအိမ်ထောင်စုအသိဉာဏ် induction မြှုပ် w ...
စားပွဲတင်ထိုင်နေသောလက်မြှုပ် touchless အလိုအလျောက် li ...